Ciidamada dowladda oo Toogtay nin wariye ku dilay magaalada Baladwayne. – Radio Daljir
Beledweyne, Apr 06 -Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ee gobolka Hiiraan ayaa toogtay mid ka mid ah rag hubaysan oo galinkii dambe ee shalay ku dilay magaalada Baladwayne Mahad Salaad Aadan oo ka mid ahaa wariyeyaasha ka howlgalla magaalada Baladwayne.
Wariye Mahad Salaad Aadan ayaa waxaa la xaqiijiyay inay sadex nin oo wajiga uu u duubanyahay inay rasaas la beegsadeen xilli uu ku sugnaa xaafadda Siigaalow ee magaalada Baladwayne.
Maxamed Nuur Dabaashe oo ka mid ah saraakiisha magaalada Baladwayne ka howlgalla ayaa waxaa uu sheegay ciidamada dowladda inay isku dayeen inay nolol ku qabteen gacan ku dhiiglaha dilka u gaystay wariye Mahad, balse ay adkaatay in la qabto kadib markii uu iska caabin uu sameeyay.
Waxaa uu sheegay in xiligaan ay hayaan maydka mid ka mid ah raggii dilay AHUN wariye Mahad Salaad Aadan, wararka qaar ayaa sheegaya maydka gacan ku dhiiglaha dilka gaystay in lagu jiid jiiday wadooyinka magaalada Baladwayne.
AHU wariye Mahad Salaad Aadan ayaa ka howlgalayay idaacadda Codka Hiiraan ee magaaladda Baladwayne, waxaana sidoo kale uu ahaa wakiilkii idaacadda Shabelle ee gobolka Hiiraan.